Tác Giả Harry Potter: “Thất Bại Làm Mọi Thứ Trở Nên Đơn Giản Hơn, Bạn Chỉ Cần Sống Chết Với Nó” | Anybook.vn - Anybook
Tác Giả Harry Potter: “Thất Bại Làm Mọi Thứ Trở Nên Đơn Giản Hơn, Bạn Chỉ Cần Sống Chết Với Nó” | Anybook.vn
Talohan’ny nivoahan’ny andian-tantara malaza “Harry Potter”, ny mpanoratra JK Rowling dia nisedra olana maro, nieritreritra ny fahafatesana mihitsy aza. Saingy rehefa dinihina tokoa, dia nandresy tamin’ny sitrapony ihany koa izy.
JK Rowling, mpanoratra vehivavy anglisy teraka tamin’ny 1965 no mpanoratra ny andian-tantara Harry Potter malaza eran-tany. Raha mahasarika tanora maro io asa io amin’ny alalan’ny herin’ny maizina eo amin’ny tontolon’ny ody, dia mendrika ny “fahagagana” ihany koa ny fiainan’i Rowling: Niaina mafy tamin’ny asa vonjimaika, fiainana, fanambadiana fohy sy fahantrana izy talohan’ny nahatongavany ho isan’ireo olo-malaza indrindra eran-tany. mpanoratra malala.
Ankehitriny, izao tontolo izao dia mahafantatra ny tantaran’ny Child-Alive Harry Potter, saingy tsy dia maro ny olona afaka mahatakatra ny fahasarotana ao ambadik’io sary io. Lesona azo ampiharina tokoa ilay izy. Toa mitarika ho amin’ny fianjerana mora foana ny tsy fahombiazana. Ity tantara manaraka nataon’i JK Rowling ity dia hampiseho amintsika ny fomba handresena haingana ireo tsy fahombiazana ireo amin’ny fiatrehana azy ireo amim-pahasahiana.
Tany am-piandohan’ireo taona 90 dia niverina tany Angletera i JK Rowling ary nanorim-ponenana teo akaikin’ny anabaviny tany Scotland. Telo taona tany Portiogaly no tena fotoan-tsarotra ho azy raha tany, namarana fanambadiana fohy taorian’ny nahaterahan’ny zaza vao teraka.
Tao anatin’ny taona vitsivitsy, JK Rowling dia niady mafy mba hivelomana. “Reny tokan-tena aho, tsy an’asa ary angamba no mahantra indrindra amin’ireo olona tsy antsoina hoe tsy manan-kialofana any Angletera,” hoy izy nandritra ny lanonana nahazoany diplaoma tao amin’ny Oniversite Harvard. Nandritra izany fotoana izany, dia ketraka izy noho ny tsy fahombiazana sy ny fahasorenana ary ny fahatsapana ho tsy afa-manoatra. Nieritreritra ny fahafatesana mihitsy aza izy. Soa ihany anefa fa tamin’izany fotoan-tsarotra izany dia lasa famonjena azy ny fanoratana.
JK Rowling dia nahazo ny hevitra momba ny andiany “Harry Potter” tamin’ny lamasinina iray avy any Manchester ho any Londres taona maro lasa izay. Tany Portiogaly, dia nanomboka namorona ny toko voalohany izy. Rehefa niverina tany Ekosy anefa izy vao tena nahita aingam-panahy hamita io asa nanova fiainana io. Nahavita ny boky roa voalohany i Rowling raha mbola miaina amin’ny fandoavana ny fiahiana. Ny sarin’ny “dementor” hita ao amin’ny boky faha-3 amin’ny andian-dahatsoratra dia naorina tamin’ny toe-tsaina tsy milamina tamin’izany fotoana izany.
Ary taorian’ny taona maro niarahana tamin’ny sain’ny “Harry Potter”, JK Rowling dia tena nanentana ny maro amintsika amin’ny fikatsahantsika fahombiazana.
1 Ny lavaka tsy hita noanoa no fototra fa tsy ny fiafarana
2 Ny tsy fahampiana ara-toekarena dia tsy zavatra ratsy toy izany
3 Ny tsy fahampiana dia mety hampitombo ny vokatra sy ny fahaiza-manao
4 Tsy ekena avy hatrany ny fahombiazana
5 Ny fahombiazana dia mifanandrify mivantana amin’ny fikirizana
6 Zavatra tokony ho fantatrao
Ny lavaka tsy hita noanoa no fototra fa tsy ny fiafarana
Ara-tsaina, tonga any amin’ny lavaka mangitsokitsoka isika rehefa manaiky ny hamela izany rehetra izany, tsy mieritreritra vahaolana sy miatrika izany intsony. Izay ihany koa no fotoana tsy mahafoy antsika intsony ka mahatsapa fa mbola maro ny lalana mbola misokatra ho antsika. Amin’izay koa rehefa miteny amin’ny tenantsika isika hoe: eny, izay ihany.
READ Không Gia Đình, tác giả Hector Malot | Anybook.vn
Raha ny marina, ny hantsana dia tsy ny faran’ny. Ny fahatsapana ho latsaka any amin’ny lavaka mangitsokitsoka matetika dia mitondra “effet secondaire” hafa. Izany no fanafahana. Satria rehefa tsy misy na inona na inona ho very dia tonga dia manana fototra ho fiorenan’ny fandrosoana isika.
Raha ny momba an’i JK Rowling, manoloana ny fahaketrahana tafahoatra sy ny fahatsapana fa tsy misy intsony ny hivoahana amin’ny fahatapahan-jiro – dia nanaiky ny hiaina amin’izany tsy fahombiazana izany izy ary heveriny ho teboka farany izany hantsana izany. Nino ny toe-javatra mampalahelo noforoniny ho an’ny tenany izy. Niova anefa ny zava-drehetra ary niova koa ny fomba fisainany. Nanomboka nitady fahafahana vaovao izy. Rehefa nandeha ny fotoana, dia tsapany fa na manao ahoana na manao ahoana ny zava-mitranga, dia mbola betsaka lavitra noho izany no miandry azy: na ny fahombiazana na ny fanamby vaovao.
Amin’ny fisehoan-javatra lehibe dia tsy mila manahy ny amin’izay eritreretin’ny olona isika, ary tsy tokony hanohy hiaritra fanaintainana maharitra. Azo atao tanteraka ny mifantoka amin’ny tanjona vaovao amim-pitandremana kokoa nefa tsy misy fisalasalana. Miaraka amin’ny fototra efa tafapetraka, afaka mandroso tanteraka isika amin’ny fahatokisana bebe kokoa, fahatokisana bebe kokoa, tsy misy risika kely kokoa noho ny teo aloha. Vao mainka mandrisika antsika hikatsaka fahombiazana.
Mazava ho azy fa tsy mora amintsika ny mieritreritra toy izany rehefa ao anatin’ny alahelontsika isika. Saingy ny fahatsapana tsy faly dia tsy mandeha ho azy satria tiantsika izany. Tsy dia zava-dehibe loatra izany, ny olana dia tsy maintsy manapa-kevitra ianao na hanaiky ny fiainana toy izany na hiezaka ny ho tafarina amin’izany fanaintainana izany.
Ny tsy fahampiana ara-toekarena dia tsy zavatra ratsy toy izany
Ny tsy fahombiazana dia afaka mametraka enta-mavesatra ara-bola eo an-tsorokao ary manery anao handao zavatra sasany. Tsy izay ihany anefa.
Raha mpandraharaha manana aretin’andoha amin’ny entana miadana ianao, dia mety ho voatery hitady loharanom-bola vaovao. Ary mandra-pahafahanao mampifanaraka dia tsy maintsy mitady fomba hanapahana zavatra sasany ianao. Amin’izao fotoana izao dia voatery ho sahirana kokoa ianao.
Any amin’ny ankamaroan’ny firenena mandroso, miaina ao anatin’ny fiarahamonina manankarena sy manankarena isika. Ary rehefa zatra izany fahatsapana feno izany isika dia mora ny malahelo amin’ny fahasahiranana. Raha ny marina dia tsy marina tanteraka izany fisainana izany. Arakaraka ny ananantsika no vao mainka sarotra ny fiainantsika. Rehefa mitabataba loatra ny zava-drehetra dia sarotra ho antsika koa ny mifantoka. Izany no mahatonga antsika hiankin-doha bebe kokoa.
Ny mpampianatra psikolojia Barry Schwartz dia nandany fotoana betsaka nikaroka ity lohahevitra ity. Ao amin’ny bokiny, The Paradox of Choice, dia manazava ny antony ananantsika fisainana “mivadika” toy izany izy: Na dia malaza amin’ny safidy malalaka aza ny kolontsaina maoderina, dia tsy voatery ho zavatra tsara ny fananana safidy be loatra. Nohamafisin’ny fikarohana fa arakaraka ny hamaroan’ny renivola tsy maintsy ampiasantsika no mahatonga antsika tsy tapa-kevitra.
READ Trúc Mã Là Sói (Tập 1), tác giả Mèo Lười Ngủ Ngày | Anybook.vn
Ny tsy fahampiana dia mety hampitombo ny vokatra sy ny fahaiza-manao
Rehefa niverina tany Angletera i JK Rowling, dia tsy nanana asa na fahaiza-manao hahazoana vola. Izany no nanosika azy hametraka ny fony rehetra hanoratra. Vokatr’izany, dia niasa imbetsaka noho ny teo aloha izy, nandritra ireo taona nanaraka. Niova tanteraka ny fiainany nanomboka teo.
Heveriny ho anisan’ny fiainany tsotra izany. Tsy manana zavatra be atao izy ao anatin’ny iray andro. Mifoha maraina fotsiny izy sy ny zanany vavy dia mandeha any amin’ny fivarotana kafe. Nandany fotoana nanoratra izy raha natory tsara teo anilany ny zanany vavy.
Ny tsy fahampiana eo amin’ny fiainana koa dia manampy antsika ho mora kokoa amin’ny zavatra rehetra. Rehefa manana renivola betsaka isika dia manaraka mora foana ny lalan’ny mpialoha lalana. Izany no mahatonga antsika tsy hijery afa-tsy ny fahafahana vaovao. Ity olana ity dia tsy voafetra amin’ny tsy fahampiana. Raha te handeha lavitra ianao dia mieritrereta bebe kokoa, lehibe kokoa, lavitra kokoa. Ataovy mamorona ny tenanao, dia ho lasa tosika lehibe ho anao izany.
Ny tsy fahombiazana dia manamora ny zava-drehetra, mifantoka fotsiny amin’ny lalana iray ianao dia miaina sy maty miaraka aminy. Raha vao jerena dia mety ho sakana ireo, fa raha ampiasaina dia afaka manampy anao hamorona fanentanana vaovao.
Tsy ekena avy hatrany ny fahombiazana
Ny dingana voalohany amin’ny fahombiazana matetika dia miankina amin’ny kalitaon’ny vokatra ataonao sy ny ezaka ataonao tsy tapaka. Ny fahombiazana tany am-boalohany dia tsy vitan’ny hoe mandray anjara amin’ny vokatra lehibe, fa mampiseho ihany koa ny hanoanana anao, vonona ny handeha amin’ny fahombiazana manaraka.
Ankehitriny, mazava ho azy fa malaza eran-tany ny anaran’i Rowling. Ny fahombiazan’ny andian-dahatsoratra “Harry Potter” dia azo antoka fa tsy noho ny vintana fotsiny. Ireo mpitsikera literatiora dia tsy maintsy miaiky fa mpanoratra manan-talenta i Rowling. Raha ny antsika mpamaky, dia tafaroboka ao anatin’ny tontolon’ny fantasy mahasarika azy.
Na izany aza, tsy misy asa lehibe ho fantatra avy hatrany. Loharanom-baovao maro no nilaza fa tamin’ny famoahana voalohany ny andian-tantara “Harry Potter”, hatramin’ny 12 mpitory malaza any Angletera no tsy nety namoaka ilay andian-tantara. Ny asa voalohany amin’ny andiany, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, dia naharitra herintaona nahafeno fepetra ho an’ny famoahana.
Hatramin’izao, ity boky 1 ity irery dia efa namidy maherin’ny 100 tapitrisa maneran-tany. Ity isa ho an’ny andiany manontolo ity dia mihoatra ny 400 tapitrisa kopia. Io ihany koa no isa lehibe indrindra amin’ny andiany iray manerantany.
Ny fahombiazana dia mifanandrify mivantana amin’ny fikirizana
Raha jerena ny ho avy, mora ny mihomehy amin’ny fandavan’ny mpamoaka ny andian-tantaran’i Rowling tany Angletera tamin’izany fotoana izany. Na izany aza, heverinao ve fa raha very fanantenana i Rowling taorian’ny iray tamin’ireo fandavana ireo dia tsy ho afaka namaky ity asa malaza ity izahay. Hevitra mampatahotra izany, saingy tsy mitombina.
Tsy natao hampiroboroboana ny fiheverana fa na sarotra toy inona aza izany, dia tsy maintsy mandroso isika – an-jambany. Indraindray, tsy ampy tsara isika ary indraindray, ny zavatra azontsika dia tsy mifanaraka amin’ny ezaka ataontsika. Mila mailo isika mba hahatsapa hoe aiza no mety amin’ny fijanonana.
Momba ny fikirizana no tiana ambara eto. Ny fandavana, ny tsy fahombiazana dia azo antoka fa tsy mora ny manaiky. Na izany aza, raha manana finoana matanjaka ianao fa sarobidy ny sainao, andramo indray, avereno ary avereno. Lafin-javatra lehibe ny fikirizana raha tena te hahomby ianao.
Amin’ny kajikajy, ny lalàn’ny maro an’isa dia milaza fa raha toa ka ambany ny vokatra azonay, ny isan’ny fitsapana dia hanana anjara toerana lehibe amin’ny famaritana ny vokatra.
Ohatra, raha mandatsaka vola indroa ianao, dia mety ho ratsy vintana ianao raha mahazo rambony roa na dia 50/50 aza ny mety ho fahombiazana. Na izany aza, raha mamerina vola madinika 200 ianao, ny vokatra azonao dia ho isa kisendrasendra kokoa.
Zavatra tokony ho fantatrao
Misy karazany roa ny tsy fahombiazana: ny tsy fahombiazana vonjimaika sy ny tsy fahombiazana mafy. Mety hitranga amin’ny fotoana rehetra ny fihemorana vetivety ary manampy antsika hivoatra. Mandritra izany fotoana izany, ny fihemorana lehibe dia tsy mitranga matetika, fa rehefa mitranga izany dia afaka manova ny fomba fijerintsika ny tenantsika.
Mazava ho azy fa ireo karazana tsy fahombiazana ireo dia mampalemy antsika.
Raha ny momba an’i JK Rowling, dia samy niaina ireo karazana tsy fahombiazana izy. Talohan’ny nahatongavany ho mpanoratra nahomby indrindra teo amin’ny fiainany, dia nanana olana manokana izy. Ireo fahasahiranana ara-psikolojika ireo dia tsy mitovy amin’izay nisy teo aloha sy mbola ho atrehintsika.
Ary afaka manome lesona sarobidy ho antsika ny tantarany:
I. Jereo ny halalin’ny krizy ho toy ny fahafahana, fa tsy fiafarana. Miakatra ny “effet side” amin’ny fianjerana. Tsy misy hantsana hianjera intsony, nifangaro ihany koa ny loza mety hitranga. Miaraka amin’ny fanaintainana sy ny fahadisoam-panantenana rehetra misy, dia tsy mora ny mahita ny hantsana ho toy ny fahafahana. Fa andeha hojerentsika izany ary hiezaka hanararaotra izany fahafahana izany.
II. Ampiasao ny tsy fahampiana mba hananganana fahaiza-manao sy hamoronana antony manosika. Amin’ny ankapobeny, ny tsy fahombiazana dia hanongana antsika amin’ny fetra. Manery antsika hanao ratsy kokoa ny tsy fahombiazana. Saingy tsy maninona izany, tsy zavatra ratsy izany. Ny tsy fahampiana dia manafoana ny fiantraikany hafa. Izy ireo dia hanery antsika ho tia mamorona mba hahita lalana vaovao ho amin’ny fahombiazana.
III. Raiso foana ny fifehezana amin’ny fampitomboana ny taham-pahombiazana amin’ny alàlan’ny fikirizana sy ny fikirizana. Ny fahombiazana dia miankina amin’ny ezaka maharitra ary koa ny asa kalitao. Afaka mamorona vokatra miavaka izay mbola tsy fantatra. Avereno indray izany. Hevero ho lalao matematika ity. Andramo fotsiny, andramo indray fa ho avy ny fahasamihafana.
Ampahany lehibe amin’ny fiainantsika ny tsy fahombiazana. Afaka manakana antsika amin’ny lalana mankany amin’ny fahombiazana ho avy izy ireo. Ny fiatrehana ny tsy fahombiazana dia fahaizana ary ny fiomanana ara-tsaina dia hanampy antsika betsaka.
Mazava ho azy, miaraka amin’ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo, mora foana ny miteny noho ny atao – imbetsaka. Ny fanontaniana dia hoe sahy miroso amin’ny ady amin’ny faharesena ve isika sa tsia. Izaho dia, ahoana ny aminao?
Araka ny kenh14.vn
Previous: Các Tác Phẩm Văn Học Trung đại Lớp 7 | Anybook.vn
Next: Java là gì? Học Java với 11 tài liệu “chất” từ các Java Guru | Anybook.vn